အမညျ သင်ျခြာ ဝိဉာဉျ ဂဏနျးအဟော - Latest Myanmar News
အမညျ သင်ျခြာ ဝိဉာဉျ ဂဏနျးအဟော
အနောကျတိုငျး ဂဏနျးဗဒေငျနညျးအရ အမညျသင်ျခြာဝိဉာဉျ ဂဏနျး တှကျပုံတှကျနညျးကို ဦးစှာ ဖျေါပွလိုပါသညျ။ ဒီနညျးက ငယျငယျကတညျးက ကြှနျတျောစာဖတျတဲ့အခါမှတျစုထုတျထားလရှေိ့ပါတယျ။
မဂ်ဂဇငျး တဈအုပျအုပျထဲမှာ ပါတဲ့နညျးပါ။ (မဂ်ဂဇငျးတော့ မမှတျမိတော့ပါ.ဂမ်ဘီရဆနျးကွယျလို့ထငျပါတယျ.)ကိုယျတိုငျ တှကျစဈလို့ရအောငျပါ။ဤနညျးမှာ နာမညျတဈခုခုကို သိရှိရုံမြှနှငျ့ တှကျခကျြနိုငျပါသညျ။
အောကျကပုံမှာဖျေါပွထားသညျ့ အက်ခရာစာလုံးမြားနှငျ့ သင်ျခြာသကျမှတျခကျြမြားအရ နာမညျတဈခု၏ အမညျသင်ျခြာ ဝိဉာဉျဂဏနျး ကို တှကျယူ နိုငျပါသညျ။
ဥပမာ(၁) ကြျော ကြျော သနျး ဆိုသော အမညျကို တှကျခကျြလိုလှငျြ
K yaw K yaw T han
(၂+၁+၁+၆) + (၂+၁+၁+၆) + (၄+၅+၁+၅)
၁၀ + ၁၀ + ၁၅ = ၃၅
၃+၅ = ၈အမညျ သင်ျခြာဝိဉာဉျ ဂဏနျး (၈) ကိုရရှိပါသညျ။
အမညျ သင်ျခြာ ဝိဉာဉျ ဂဏနျးအဟောမြား
၁ – ဂဏနျး
၁ – ဂဏနျးရသော အမညျသညျ နမေငျး (သို့မဟုတျ) တနင်ျဂနှဂွေိုဟျကို ကိုယျစားပွုသညျ။ သကျဆိုငျသူကို ပွီးမွောကျအောငျမွငျစသေော သင်ျခြာဂဏနျးဖွဈသညျ။
စှနျ့ဦးတီထှငျသူ၊ စတငျတညျထောငျသူ၊ ခွလှေမျးသဈမြား ကွီးကယျြမွငျ့မွကျလိုသော ဆန်ဒ၊ ဆုလာဘျဘှဲ့တံဆိပျတို့ကို ဖျေါညှနျးပွဆိုပါသညျ။
အလုပျတဈခုခုကို ပွတျသားစှာ နောကျမဆုတျပဲ ဖွဈသညျ့နညျးနှငျ့အောငျမွငျ ပွီးမွောကျသညျအထိ လုပျဆောငျတတျသညျ့ သဘောရှိသညျ။ ခြုပျခယျြမှုကို လကျမခံနိုငျပဲ လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးသညျ။
အမြားနှငျ့ကှဲပွားသော မှတျသားစရာအခကျြမြား ရှိတတျ၏။ အားကောငျးသော စိတျတနျခိုး စှမျးအားမြားကို ပိုငျဆိုငျစသေညျ။
အရေးပါမှု၊ ဂုဏျကကျြသရေ၊ အကငျြ့စာရိတ်တ၊ ရညျရှယျခကျြနှငျ့ မာနျမာနကို အပှနျးအပဲ့မခံ ဇှဲသနျတတျသညျ။ ထီးထီးမားမား မွငျ့မွငျ့မွတျမွတျ ရှိသညျ့ ဂိုဏျးဂဏ၊ ပါတီသမဂ်ဂ၊ ဘာသာအယူ ဝါဒတဈခုခုတို့၏ ခေါငျးဆောငျအဖွဈ ပွဆိုသညျ။
စစေ့ပျသခြော၍ အောကျသကျကကြော ပိုငျနိုငျပါသညျ။ ဓနဂုဏျ၊ ရာထူးဂုဏျ၊ ဘဝအခွအေနေ၊ အဆငျ့အတနျး ပွောငျးလဲတိုးတတျ ဖွဈထှနျးမှုနှငျ့ အောငျမွငျမှုကို သခြောအောငျ အာမခံခကျြပေးသညျ့ ဂဏနျးတဈခု ဖွဈပသေညျ။
၂ – ဂဏနျး
၂ ဂဏနျး ရသော အမညျသညျ လမငျး (သို့မဟုတျ) တနင်ျလာဂွိုဟျကို ကိုယျစားပွုသညျ။ အနုပညာဆနျသညျ။ အလှအပမြားစှာနှငျ့ သကျဆိုငျသညျ။
တေးကဗြာ၊ လင်ျကာဂီတ၊ ပနျးခြီ၊ ပနျးပု၊ ပနျးပညာအနုလကျရာမြား၊ သုခုမသဘငျ ပညာတို့တှငျ ထငျရှားအကြိုးပေးတတျသညျ။ ရှေးဟောငျးအမှအေနှဈနှငျ့ ပိုငျဆိုငျမှုကို ဖျေါပွသညျ။
သို့သျော လကျတှမေ့ဆနျသော စိတျကူးယဉျမှုက အားနညျး၊ အားပြော့သညျ့သဘောကို ပွဆိုသညျ။ ဆှဲဆောငျရာသို့ ပါလှယျခွငျး၊ စုစညျးခိုငျမာမှုမရှိခွငျးတို့ကွောငျ့ အလှယျတကူ သိမျးပိုကျခံရတတျသညျ။
မငွိမျသကျခွငျး၊ ရှလြေ့ား ပွောငျးလဲတတျခွငျး၊ စှဲမွဲမှုမရှိတတျခွငျး၊ ယုံကွညျမှုအားနညျးခွငျးမြား ရှိမညျ။ အရှကျအကွောကျကွီးသော ယဉျကြေးသော ဗီဇသဘာဝရှိသညျ။
တီထှငျကွံဆမှုသဘော ပွဆိုလိုသျောလညျး ဆုံးဖွတျခကျြမြား ခိုငျမာပွတျသားမှု မရှိပဲ အကွံအစညျမြား မအောငျမမွငျ ဖွဈကာ ပကျြပွားတတျသောကွောငျ့ ခိုငျမာပွတျသားသောစိတျဓါတျ၊ ကွံ့ခိုငျသော အားမာနျကို ပွုစုပြိုးထောငျ၍ တတျကွှပွီး လကျတှကေ့သြညျ့ ပွောငျးလဲမှုမြား လိုအပျပါသညျ။
၃ – ဂဏနျး
၃ – ဂဏနျး ရသောအမညျသညျ ကွာသပတေးဂွိုဟျကို ကိုယျစားပွုသညျ။ စညျးမဉျြး၊ စညျးကမျး ဥပဒကေို လိုကျနာ၊ လေးစားခွငျးကို ဖျေါပွသညျ။ ရညျရှယျခကျြမွငျ့မား၍ ကွီးမွငျ့လိုသော ဆန်ဒအားကွီးခွငျး၊ စညျးကမျးကွီးခွငျးကို ပွဆိုသညျ။
မညျသညျ့လူမြိုး၏ လကျအောကျတှငျမှ မနလေိုကွခြေ။ အုပျခြုပျရေးဘကျ၊ စဈဘကျတှငျ အကြိုးပေးသညျ။ သူတဈပါးလကျအောကျခံဘဝတှငျ နလေိုစိတျမရှိပဲ၊ အလုပျအကိုငျ၊ အရှအေ့ပွောငျး မြားတတျသညျ။
အမိနျ့ဩဇာ၊ အာဏာပေးရနျ ဝါသနာပါသညျ။ စခေိုငျးညှနျကွားခကျြမြား တဈခုပွီးတဈခု ထုတျတတျသညျ။ သူတဈပါးကို ဆရာလုပျကာ ပါဝါပွပွီး လမျးညှနျဩဝါဒမြား ပေးတတျသညျ။ ကွာသပတေးဂွိုဟျ၏ သဘောအရ ကောငျးကြိုးခမျြးသာ၊ ဂုဏျကကျြသရတေို့ကို ညှနျးဆိုသညျ။
တဈနထေ့ကျတဈနေ့ တဈရှရှေ့ေ့ တိုးပှား ကွီးမွငျ့ခွငျး၊ မွငျ့မားသော ဘဝအဆငျ့အတနျးသို့ ရောကျရှိခွငျးကို ပွဆိုသညျ။ ဉာဏျပညာနှငျ့ပွညျ့စုံ၍ အမညျသတငျး ကြျောကွားတတျသညျ။
သို့သျော မမြှျောလငျ့သော အဖကျြတရားကို ကွုံတှရေ့တတျသညျ။ သူတဈပါးကို အတငျးကာရော ပုံစံခှကျသို့ထညျ့ကာ ပုံသှငျးတတျမှုကွောငျ့ ဆနျ့ကငျြမှုမြား ကွုံရတတျပါသညျ။ ကွီးပှားရေး၊ စီးပှားဖွဈထှနျးရေးအတှကျ ဂဏနျးကောငျးပငျ ဖွဈပါသညျ။
၄ – ဂဏနျး
၄ – ဂဏနျးသညျ ယူရေးနပျဈဂွိုဟျကို ကိုယျစားပွုသညျ။ စိတျနေ၊ စိတျထား တငျးမာ၍ အလုပျတဈခုကို မဖွဈဖွဈအောငျ ပွုလုပျတတျသညျ့ သဘောဆောငျမညျ။ ၄ – ဂဏနျးသညျ ထကွှ၊ ဆနျ့ကငျြ၊ အုံကွှ၊ ပုနျကနျမှု၏ ပွယုဂျပငျဖွဈ၏။
ဥပဒကေို ပွောငျးပွနျလုပျပဈခွငျး၊ သူတဈပါးနှငျ့ အတိုကျအခံ ဆနျ့ကငျြခွငျး၊ ငွငျးခုနျစောဒကတတျ ခွငျးမြား ရှိမညျ။ ပတျဝနျးကငျြနှငျ့ မသငျ့မတငျ့ရှိတတျသညျ။ ၎င်းငျးအား ဝိုငျးပယျမှု၊ အားနှငျ့ ဖိနှိပျမှုပွုခွငျးကို ခံရတတျ ပါသညျ။
စီးပှားရေးတှငျ အောငျမွငျမှုရရနျ ခဲယဉျးစှာ ရငျဆိုငျ၍ အခကျအခဲမြားစှကို ကြျောဖွတျရတတျသညျ။ ဆကျဆံရေးတှငျ ခြောမောပွလေညျခွငျးမရှိပဲ ထငျရာမွငျရာကိုသာ ပွောဆိုလုပျကိုငျတတျကွသညျ။
အမူအကငျြ့ ဓလစေ့ရိုကျမှာ တဈမူထူးခွားပွီး ထိုအခကျြသညျပငျ အမြားနှငျ့ကှဲလှဲမှုကို ဖွဈစသေညျ။ ပွောဆိုလုပျကိုငျရာတှငျ တရားသေ ကိုငျစှဲမှုမြား ရှိမညျဖွဈပွီး သကျဆုံးတိုငျလညျး လုပျကိုငျတတျသညျ။
ဘာသာတရား၊ ဝါဒသဘောထား၊ ဥပဒစေညျးမဉျြးမြားကို ပွောငျးလဲလိုသော ဉာဉျရှိမညျ။ မဟုတျမခံစိတျရှိပွီး အလြှော့မပေးတတျပေ။ လှုပျရှားရုနျးကနျ ရမညျ့ သင်ျခြာဂဏနျးပငျ ဖွဈသညျ။
ဒေါသဖွဈလှငျြ ပွရေနျမလှယျကူပါ။ စိတျကွီးပွီး၊ စိတျထိခိုကျလှယျသညျ။ ထငျသလို ဖွဈမလာသောအခါ စိတျဖွဖြေောကျရနျ ခဲယဉျးမညျ။ စိတျရှညျသညျးခံမှသာ အောငျမွငျနိုငျပါလိမျ့မညျ။
၅ – ဂဏနျး
၅ – ဂဏနျး ရသောအမညျသညျ ဗုဒ်ဓဟူးဂွိုဟျကို ကိုယျစားပွုသညျ။ သှကျလကျဖကျြလကျခွငျး၊ သိလှယျ၊ တတျလှယျခွငျး၊ အကငျးပါးခွငျးမြားရှိမညျ။ ပညာဉာဏျကွီးမွငျ့ကာ ဉာဏျထကျမွကျသညျ။ မွနျဆနျမှုရှိမညျ။
ဟောဟောဒိုငျးဒိုငျး ပွုမူလုပျကိုငျတတျသညျ။ ဆုံးဖွတျခကျြမွနျဆနျပွီး ဆိုငျးငံ့ခွငျးမရှိပဲ ခကျြခငျြးလုပျရမှ ကနြေပျမှု ရှိမညျ။ ငှကွေေးရှာဖှရောတှငျ စိတျရောကိုယျပါ အပငျပနျးခံပွီး အလှငျြအမွနျ ရှာဖှတေတျသောကွောငျ့ ရလှယျသညျ။
သို့ရာတှငျ အလောငျးကစားဆနျဆနျ ပွုမူလုပျကိုငျတတျ၍ မှားယှငျးကုနျဆုံးရတတျသညျ။ သို့သျော အမှားကို ပွနျလညျ ပွုပွငျနိုငျစှမျးရှိသောကွောငျ့ အောငျမွငျမှုမြားပွနျ၍ ရတတျပွနျပါသညျ။
မိတျဆှမြေားနှငျ့ ခဈြခငျ၊ ပြျောရှငျစှာ ပေါငျးသငျး၊ ဆကျဆံမှုရှိတတျသညျ။ အပေါငျးအသငျး ဝငျဆနျ့ပွီး မြားပွားရတတျသညျ။ လုပျငနျးမြားတှငျ အကှကျခပြွီး လုပျကိုငျဆောငျရှကျတတျသညျ။
စိတျမွနျခွငျးကို ရှောငျ၍ ခှငျ့လှတျသညျးခံကာ စဉျးစားဆငျခွငျ လုပျကိုငျလှငျြ စီးပှားရေးတှငျ အထူးအောငျမွငျမညျ။ မိတျဆှသေဈမြားနှငျ့ခငျမငျလှယျကာ လိုငျးရှေးခယျြမှု မြားပွား မညျ။
စိတျထိခိုကျလှယျသညျ။ ကုနျရောငျး၊ ကုနျဝယျ လုပျကိုငျတတျခွငျး၊ ဈေးကစားတတျခွငျးတို့ ရှိမညျ။ အလုပျတဈခြို့ကို တဈပိုငျးတဈစနှငျ့ ပဈထားတတျသော အကငျြ့ရှိတတျသညျ။
တဈခါတဈရံ မရမေရာ၊ မသခြောပဲ နရောတကာ ဝငျပါကာ အခြိနျကို အလဟဿ ဖွုနျးတီးတတျပါသညျ။ စိတျထားနှဈမြိုး ရှိတတျ၍ အခြို့ကိစ်စမြားတှငျ ရဲရငျ့လှနျးနတေတျပွီး အခြို့တှငျမူ ကွောကျရှံ့လှနျးနတေတျပွနျပါသညျ။
တဈခါတဈရံ ရကျရောသျောလညျး တဈခါတဈရံတှငျ နှမွောတှနျ့တိုတတျပွနျပါသညျ။ သနားတတျသော စိတျရှိသျောလညျး တဈခါတဈရံ ရကျစကျတတျ ပွနျပါသညျ။ တညျငွိမျ စှဲမွဲမှုရှိရနျ လိုအပျပါသညျ။
၆ – ဂဏနျး
၆ – ဂဏနျးရသော အမညျသညျ သောကွာဂွိုဟျ၏ အမှတျအသားဖွဈသညျ။ အပေါငျးအသငျး၊ မိတျသင်ျဂဟ ပေါမြားခွငျး၊ လူခဈြ၊ လူခငျမြားခွငျး၊ ပရိသတျ ခဈြခငျကွညျညိုမှုမြား ရရှိခွငျးတို့ကို ပွဆိုပါသညျ။
အနုပညာကို လိုကျစား ဝါသနာထုံတတျသညျ။ အလှအပကို မကျမောတတျသညျ။ လှပအောငျ ပွုပွငျပွငျဆငျတတျကာ အနုအရှ မြားကို ဖနျတီးလုပျဆောငျတတျသညျ။
အနုပညာစိတျရှိကာ စိတျနှလုံး နူးညံ့သိမျမှတေ့တျသျောလညျး အယူအဆနှငျ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြားတှငျ လှနျစှာခေါငျးမာ၍ မာနျမာန ရှိတတျသညျ။ အလုပျကိုတိကသြခြော၍ ဆုံးခနျးတိုငျအောငျ လုပျဆောငျတတျသညျ့ သဘောရှိသညျ။
စိတျဆန်ဒက ပွဌာနျးထားသညျ့ ကိစ်စမြားကို အရိုးကွကွေေ၊ အရခေနျးခနျး ရရှိသညျအထိ စှမျးဆောငျတတျကွသညျ။ စိတျတနျခိုးအငျအား ထကျမွကျမှုကွောငျ့ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေးနယျပယျတှငျ အောငျမွငျတတျကွပါသညျ။
ခဈြခငျမိသူမြားကို အစစအရာရာသညျးခံကာ အလိုလိုကျတတျကွသျောလညျး ခေါငျးမာမိပါက မညျသူ့ကိုမှ အလြှော့ပေးမညျမဟုတျပါ။
တောကျပကွညျလငျသော အရောငျအဆငျးနှငျ့ အလှအပကို ကွိုကျနှဈသကျတတျကာ သငျ့တငျ့လြောကျပတျအောငျ ဆငျယငျတတျသော ပနျးခြီမကျြစိ အခွခေံရှိပါသညျ။
အပေါငျးအသငျးမြားကို ခဈြခငျအောငျ ဧညျ့ခံစညျးရုံးနိုငျစှမျးရှိပွီး အခငျြးခငျြး မနာလို ကှဲပွားခွငျးကို လကျမခံကွခြေ။ ခဈြခွငျး မတ်ေတာစိတျသညျ တဈခါတဈရံ အစှနျးရောကျ၍ သှားတတျပါသညျ။ သူတဈပါးကို ဆှဲဆောငျအား ရှိမညျ။
၇ – ဂဏနျး
၇ – ဂဏနျးရှိသော အမညျသညျ နကျပျကြှနျးဂွိုဟျကို ကိုယျစားပွုသော အမှတျအသားဖွဈသညျ။ စိတျကူး၊ စိတျသနျးကောငျးသော အကွံဉာဏျကောငျးမြား ရှိကာ တှေးတော ကွံဆနိုငျစှမျးရှိသော သဘောကို ပွဆိုသညျ။
လြှို့ဝှကျနကျနဲသော သဘော၊ အဘိဓမ်မာဆနျသော သဘောတရားမြားလညျး ရှိမညျ။ ထူးခွားသော စိတျတနျခိုး မြားကိုလညျး ပိုငျဆိုငျမှု ရှိမညျ။ အဘိဓမ်မာဉာဏျနှငျ့ စိတျပညာရပျမြား၊ ဒဿန အတှေးအချေါဆနျးမြား၊ ဂမ်ဘီရပညာ၊ ဂန်ဓာရီပညာရပျမြားလညျး စူးစမျးလလေ့ာမှုမြား ရှိမညျ။
စာပဂေီတ၊ ပနျးခြီ၊ ပနျးပု၊ ပညာရပျမြားနှငျ့ ဆကျနှယျ တတျမွောကျနိုငျပါသညျ။ လေးနကျသော အကွောငျးအရာမြား၊ ဆနျးကွယျသော အကွောငျးအရာမြားကို ထူးထူးခွားခွား ရေးဖှဲနိငျစှမျး ရှိတတျကွပါသညျ။
ခိုငျမာသော အောငျမွငျမှုမြား ရရှိနိုငျပါသညျ။ လှတျလပျသော စိတျထားကို သဘောကတြတျမညျ။ စိတျပူပငျတတျသညျ။ အနာဂတျ နောငျရေးကို တှေးတော ပူပငျ ကွောငျ့ကွမှုမြား ရှိတတျပါတယျ။
ဘာသာရေးဆိုငျရာ သီးခွားအတှေးအချေါမြားလညျး ရှိနမေညျ။ ငှကွေေးမမွဲသော သဘောရှိ၏။ ကွိုတငျအလိုအလြောကျ သိမွငျနိုငျစှမျးရှိကာ တဈပါးသူကို ပွုပွငျ ဆှဲဆောငျနိုငျမညျ။
ဝိဉာဉျ သင်ျခြာ(၇)မှာ ရကေို ပိုငျစိုးသော ဓါတျဖွဈသဖွငျ့ ပငျလယျနှငျ့သကျဆိုငျသော ပညာရပျမြား၊ နိုငျငံရပျခွား၊ ဒသေန်တရ ဗဟုသုတမြား အလှနျပငျ ဝါသနာထုံတတျပါသညျ။
ရလေုပျငနျးဆိုငျရာနှငျ့ ခရီးသှားလာမှုဆိုငျရာ လုပျငနျးမြားကို နှဈခွိုကျသဖွငျ့ ထိုကိစ်စမြားတှငျ တတျကြှမျးအောငျမွငျမှုမြားရှိမညျ။
၈ – ဂဏနျး
၈ – ဂဏနျး ရသောအမညျသညျ စနဂွေိုဟျ၏ အမှတျအသား သင်ျကတေ ဖွဈသညျ။ အထီးကနျြ၊ အဖျေါမဲ့မှုကို ဖျေါညှနျးသညျ။ (၈)ဂဏနျးအမညျ သင်ျခြာ ရရှိသူသညျ စိတျဓါတျပွငျးထနျကာ လေးနကျမှုရှိသညျ။ အလယျအလကျတှငျ မနတေတျပါ။
အောကျဆုံးနှငျ့ အထကျဆုံး တဈခုခုတှငျသာ ရပျတညျတတျကွပါသညျ။ အနိမျ့အမွငျ့၊ အတတျအကြ မြားပွား မွနျဆနျစှာ ပွောငျးလဲတတျသညျ့ သဘောရှိပါသညျ။
ဇှဲအလှနျကောငျး၍ ထူးထူးခြှနျခြှနျ ကွိုးစားမှု မြားကွောငျ့ အဆငျ့မွငျ့သော ရာထူး၊ ဌာနန်တရ ကွီးမြားတှငျ ရရှိအောငျမွငျတတျကွသျောလညျး ကဆြငျး၊ ပကျြစီး၊ နိမျ့ပါးရသညျ့ သဘောမြား ရှိတတျကွပွနျပါသညျ။
မနာလိုသူမြား၊ မယုံကွညျသူမြား၊ အထငျအမွငျလှဲမှား ခံရမှုမြား ကွောငျ့ အခကျအခဲမြားစှာကို တှကွေုံ့ရတတျပါသညျ။ တစိုကျမကျမကျ မရှိခွငျး၊ အစှမျးကုနျ အားမထုတျခွငျး မြားကွောငျ့ ဆုံးရှုံးကဆြငျးရခွငျးမြား ကွုံတှရေ့တတျပါသညျ။
အထငျအမွငျလှဲမှားမှု အမြိုးမြိုး ခံရကာ ဖွရှေငျးနိုငျ စှမျးအားလညျး မရှိပဲ ဖွဈနတေတျပွနျပါသညျ။ ပွငျးထနျသော အယူအဆမြားလညျး ရှိနတေတျကွပွီး ရနျသူလညျး မြားပွားနရေတတျသညျ။
ဆငျးရဲဒုက်ခရောကျသူမြားအပျေါ ကွငျနာသနားစိတျကွီးသညျ။ မိမိ၏ကိုယျကြိုးစှနျ့ကာ ဆောငျရှကျကူညီတတျသညျ။ ပတျဝနျးကငျြတဈခုလုံးကို မညျသူ့ကိုမှ ဂရုစိုကျမနတေတျပဲ မိမိထငျသလို စိတျကွိုကျ ပွုမူနထေိုငျတတျကွပါသညျ။
မတ်ေတာတရားနှငျ့ သမာဓိအားတညျဆောကျကာ ဆငျခွငျတုံတရား လကျကိုငျထားမှသာ ကံကွမ်မာဆိုးမြားကို ဖယျရှားအနိုငျယူနိုငျပလေိမျ့မညျ။
၉ – ဂဏနျး
၉ – ဂဏနျး နာမညျသင်ျခြာသညျ အင်ျဂါဂွိုဟျ ဂုဏျသတ်တိမြားကို ကိုယျစားပွုပါသညျ။ အင်ျဂါဂွိုဟျ၏ သဘော သဘာဝကွောငျ့ အတိုကျအခိုကျတှငျ တျောတတျကွပါသညျ။ သူရဲကောငျးစိတျမြိုးရှိကာ သူရဲကောငျးဆနျဆနျလညျး ပွုမူတတျကွသညျ။
ရုတျခွညျးဆုံးဖွတျခကျြခကြာ စဈမကျြနှာအမြားအပွားဖှငျ့၍ ရနျသူကို ရငျဆိုငျခွငျးအမှု ပွုလိုတတျကွသညျ။ မအောငျမွငျသော တိုကျပှဲမြားကိုလညျး ခေါငျးမာမာနှငျ့ ဆငျနှဲတတျပွနျပါသညျ။
ငယျရှယျစဉျတှငျ ဆငျးရဲဒုက်ခအမြိုးမြိုးကို ကွုံတှရေ့တတျပွီး ကွီးပွငျးလာသောအခါမှ အောငျမွငျမှုမြား ရရှိတတျ ပါသညျ။ စိတျမွနျ၊ စိတျကွီးကာ လှတျလပျမှုကို ခုံမငျ၍ သူတဈပါး လကျအောကျတှငျ မနလေိုကွခြေ။
အတိုကျအခံ မြားစှာရှိပွီး မိမိကလညျး အတိုကျအခံ လုပျလိုသညျ။ ဖွတျထိုးဉာဏျကောငျးပွီး မိမိကိုယျကို ယုံကွညျကိုးစားမှု လှနျကဲတတျကွပါသညျ။
အခဈြကွီးလှနျးတတျပွီး အခဈြအတှကျကွောငျ့ ဘာမဆိုလုပျပေးတတျသညျ့ သဘောရှိကာ အခဈြရူးပမာ အရူးအမူး ဖွဈတတျသညျ။ သတ်တိစှမျးရညျကွောငျ့ တုပွိုငျသူမြားနသေျောလညျး နောကျဆုံးတှငျ အောငျမွငျရတတျပါသညျ။
ဘဝစဈသညျတျောမြား ဖွဈကွသညျ။ မီးဒဏျ၊ ဗုံးသနေတျ၊ ယမျးပေါကျကှဲမှုဒဏျ မြားကွောငျ့ ထိခိုကျအနာတရ ဖွဈတတျကွပါသညျ။
အိမျသူ၊ အိမျသား အတူနသေူမြားနှငျ့ မသငျ့တငျ့ပဲ ခိုကျရနျ ဖွဈပှားကာ ရှံ့ကွောကျအဖွဈ အထငျအမွငျလညျး ခံရတတျပါသညျ။ အမြားနှငျ့ ဆနျ့ကငျြဘကျအဖွဈမှ အောငျမွငျ တတျပါမညျ။
အမည် သင်္ချာ ဝိဉာဉ် ဂဏန်းအဟော
အနောက်တိုင်း ဂဏန်းဗေဒင်နည်းအရ အမည်သင်္ချာဝိဉာဉ် ဂဏန်း တွက်ပုံတွက်နည်းကို ဦးစွာ ဖေါ်ပြလိုပါသည်။ ဒီနည်းက ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့အခါမှတ်စုထုတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
မဂ္ဂဇင်း တစ်အုပ်အုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့နည်းပါ။ (မဂ္ဂဇင်းတော့ မမှတ်မိတော့ပါ.ဂမ္ဘီရဆန်းကြယ်လို့ထင်ပါတယ်.)ကိုယ်တိုင် တွက်စစ်လို့ရအောင်ပါ။ဤနည်းမှာ နာမည်တစ်ခုခုကို သိရှိရုံမျှနှင့် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။
အောက်ကပုံမှာဖေါ်ပြထားသည့် အက္ခရာစာလုံးများနှင့် သင်္ချာသက်မှတ်ချက်များအရ နာမည်တစ်ခု၏ အမည်သင်္ချာ ဝိဉာဉ်ဂဏန်း ကို တွက်ယူ နိုင်ပါသည်။
ဥပမာ(၁) ကျော် ကျော် သန်း ဆိုသော အမည်ကို တွက်ချက်လိုလျှင်
၃+၅ = ၈အမည် သင်္ချာဝိဉာဉ် ဂဏန်း (၈) ကိုရရှိပါသည်။
အမည် သင်္ချာ ဝိဉာဉ် ဂဏန်းအဟောများ
၁ – ဂဏန်း
၁ – ဂဏန်းရသော အမည်သည် နေမင်း (သို့မဟုတ်) တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သက်ဆိုင်သူကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေသော သင်္ချာဂဏန်းဖြစ်သည်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ စတင်တည်ထောင်သူ၊ ခြေလှမ်းသစ်များ ကြီးကျယ်မြင့်မြက်လိုသော ဆန္ဒ၊ ဆုလာဘ်ဘွဲ့တံဆိပ်တို့ကို ဖေါ်ညွှန်းပြဆိုပါသည်။
အလုပ်တစ်ခုခုကို ပြတ်သားစွာ နောက်မဆုတ်ပဲ ဖြစ်သည့်နည်းနှင့်အောင်မြင် ပြီးမြောက်သည်အထိ လုပ်ဆောင်တတ်သည့် သဘောရှိသည်။ ချုပ်ချယ်မှုကို လက်မခံနိုင်ပဲ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသည်။
အများနှင့်ကွဲပြားသော မှတ်သားစရာအချက်များ ရှိတတ်၏။ အားကောင်းသော စိတ်တန်ခိုး စွမ်းအားများကို ပိုင်ဆိုင်စေသည်။
အရေးပါမှု၊ ဂုဏ်ကျက်သရေ၊ အကျင့်စာရိတ္တ၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မာန်မာနကို အပွန်းအပဲ့မခံ ဇွဲသန်တတ်သည်။ ထီးထီးမားမား မြင့်မြင့်မြတ်မြတ် ရှိသည့် ဂိုဏ်းဂဏ၊ ပါတီသမဂ္ဂ၊ ဘာသာအယူ ဝါဒတစ်ခုခုတို့၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပြဆိုသည်။
စေ့စပ်သေချာ၍ အောက်သက်ကျေကာ ပိုင်နိုင်ပါသည်။ ဓနဂုဏ်၊ ရာထူးဂုဏ်၊ ဘဝအခြေအနေ၊ အဆင့်အတန်း ပြောင်းလဲတိုးတတ် ဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် အောင်မြင်မှုကို သေချာအောင် အာမခံချက်ပေးသည့် ဂဏန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။
၂ – ဂဏန်း
၂ ဂဏန်း ရသော အမည်သည် လမင်း (သို့မဟုတ်) တနင်္လာဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အနုပညာဆန်သည်။ အလှအပများစွာနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
တေးကဗျာ၊ လင်္ကာဂီတ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ပန်းပညာအနုလက်ရာများ၊ သုခုမသဘင် ပညာတို့တွင် ထင်ရှားအကျိုးပေးတတ်သည်။ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖေါ်ပြသည်။
သို့သော် လက်တွေ့မဆန်သော စိတ်ကူးယဉ်မှုက အားနည်း၊ အားပျော့သည့်သဘောကို ပြဆိုသည်။ ဆွဲဆောင်ရာသို့ ပါလွယ်ခြင်း၊ စုစည်းခိုင်မာမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် အလွယ်တကူ သိမ်းပိုက်ခံရတတ်သည်။
မငြိမ်သက်ခြင်း၊ ရွေ့လျား ပြောင်းလဲတတ်ခြင်း၊ စွဲမြဲမှုမရှိတတ်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းများ ရှိမည်။ အရှက်အကြောက်ကြီးသော ယဉ်ကျေးသော ဗီဇသဘာဝရှိသည်။
တီထွင်ကြံဆမှုသဘော ပြဆိုလိုသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ ခိုင်မာပြတ်သားမှု မရှိပဲ အကြံအစည်များ မအောင်မမြင် ဖြစ်ကာ ပျက်ပြားတတ်သောကြောင့် ခိုင်မာပြတ်သားသောစိတ်ဓါတ်၊ ကြံ့ခိုင်သော အားမာန်ကို ပြုစုပျိုးထောင်၍ တတ်ကြွပြီး လက်တွေ့ကျသည့် ပြောင်းလဲမှုများ လိုအပ်ပါသည်။
၃ – ဂဏန်း
၃ – ဂဏန်း ရသောအမည်သည် ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း ဥပဒေကို လိုက်နာ၊ လေးစားခြင်းကို ဖေါ်ပြသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မြင့်မား၍ ကြီးမြင့်လိုသော ဆန္ဒအားကြီးခြင်း၊ စည်းကမ်းကြီးခြင်းကို ပြဆိုသည်။
မည်သည့်လူမျိုး၏ လက်အောက်တွင်မှ မနေလိုကြချေ။ အုပ်ချုပ်ရေးဘက်၊ စစ်ဘက်တွင် အကျိုးပေးသည်။ သူတစ်ပါးလက်အောက်ခံဘဝတွင် နေလိုစိတ်မရှိပဲ၊ အလုပ်အကိုင်၊ အရွှေ့အပြောင်း များတတ်သည်။
အမိန့်ဩဇာ၊ အာဏာပေးရန် ဝါသနာပါသည်။ စေခိုင်းညွှန်ကြားချက်များ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထုတ်တတ်သည်။ သူတစ်ပါးကို ဆရာလုပ်ကာ ပါဝါပြပြီး လမ်းညွှန်ဩဝါဒများ ပေးတတ်သည်။ ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏ သဘောအရ ကောင်းကျိုးချမ်းသာ၊ ဂုဏ်ကျက်သရေတို့ကို ညွှန်းဆိုသည်။
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တစ်ရွေ့ရွေ့ တိုးပွား ကြီးမြင့်ခြင်း၊ မြင့်မားသော ဘဝအဆင့်အတန်းသို့ ရောက်ရှိခြင်းကို ပြဆိုသည်။ ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံ၍ အမည်သတင်း ကျော်ကြားတတ်သည်။
သို့သော် မမျှော်လင့်သော အဖျက်တရားကို ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးကို အတင်းကာရော ပုံစံခွက်သို့ထည့်ကာ ပုံသွင်းတတ်မှုကြောင့် ဆန့်ကျင်မှုများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ကြီးပွားရေး၊ စီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ဂဏန်းကောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
၄ – ဂဏန်း
၄ – ဂဏန်းသည် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စိတ်နေ၊ စိတ်ထား တင်းမာ၍ အလုပ်တစ်ခုကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်တတ်သည့် သဘောဆောင်မည်။ ၄ – ဂဏန်းသည် ထကြွ၊ ဆန့်ကျင်၊ အုံကြွ၊ ပုန်ကန်မှု၏ ပြယုဂ်ပင်ဖြစ်၏။
ဥပဒေကို ပြောင်းပြန်လုပ်ပစ်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးနှင့် အတိုက်အခံ ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ငြင်းခုန်စောဒကတတ် ခြင်းများ ရှိမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မသင့်မတင့်ရှိတတ်သည်။ ၎င်းအား ဝိုင်းပယ်မှု၊ အားနှင့် ဖိနှိပ်မှုပြုခြင်းကို ခံရတတ် ပါသည်။
စီးပွားရေးတွင် အောင်မြင်မှုရရန် ခဲယဉ်းစွာ ရင်ဆိုင်၍ အခက်အခဲများစွကို ကျော်ဖြတ်ရတတ်သည်။ ဆက်ဆံရေးတွင် ချောမောပြေလည်ခြင်းမရှိပဲ ထင်ရာမြင်ရာကိုသာ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တတ်ကြသည်။
အမူအကျင့် ဓလေ့စရိုက်မှာ တစ်မူထူးခြားပြီး ထိုအချက်သည်ပင် အများနှင့်ကွဲလွဲမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရာတွင် တရားသေ ကိုင်စွဲမှုများ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆုံးတိုင်လည်း လုပ်ကိုင်တတ်သည်။
ဘာသာတရား၊ ဝါဒသဘောထား၊ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများကို ပြောင်းလဲလိုသော ဉာဉ်ရှိမည်။ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိပြီး အလျှော့မပေးတတ်ပေ။ လှုပ်ရှားရုန်းကန် ရမည့် သင်္ချာဂဏန်းပင် ဖြစ်သည်။
ဒေါသဖြစ်လျှင် ပြေရန်မလွယ်ကူပါ။ စိတ်ကြီးပြီး၊ စိတ်ထိခိုက်လွယ်သည်။ ထင်သလို ဖြစ်မလာသောအခါ စိတ်ဖြေဖျောက်ရန် ခဲယဉ်းမည်။ စိတ်ရှည်သည်းခံမှသာ အောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
၅ – ဂဏန်း
၅ – ဂဏန်း ရသောအမည်သည် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သွက်လက်ဖျက်လက်ခြင်း၊ သိလွယ်၊ တတ်လွယ်ခြင်း၊ အကင်းပါးခြင်းများရှိမည်။ ပညာဉာဏ်ကြီးမြင့်ကာ ဉာဏ်ထက်မြက်သည်။ မြန်ဆန်မှုရှိမည်။
ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်း ပြုမူလုပ်ကိုင်တတ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်ဆန်ပြီး ဆိုင်းငံ့ခြင်းမရှိပဲ ချက်ချင်းလုပ်ရမှ ကျေနပ်မှု ရှိမည်။ ငွေကြေးရှာဖွေရာတွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ အပင်ပန်းခံပြီး အလျှင်အမြန် ရှာဖွေတတ်သောကြောင့် ရလွယ်သည်။
သို့ရာတွင် အလောင်းကစားဆန်ဆန် ပြုမူလုပ်ကိုင်တတ်၍ မှားယွင်းကုန်ဆုံးရတတ်သည်။ သို့သော် အမှားကို ပြန်လည် ပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် အောင်မြင်မှုများပြန်၍ ရတတ်ပြန်ပါသည်။
မိတ်ဆွေများနှင့် ချစ်ခင်၊ ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းသင်း၊ ဆက်ဆံမှုရှိတတ်သည်။ အပေါင်းအသင်း ဝင်ဆန့်ပြီး များပြားရတတ်သည်။ လုပ်ငန်းများတွင် အကွက်ချပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်သည်။
စိတ်မြန်ခြင်းကို ရှောင်၍ ခွင့်လွှတ်သည်းခံကာ စဉ်းစားဆင်ခြင် လုပ်ကိုင်လျှင် စီးပွားရေးတွင် အထူးအောင်မြင်မည်။ မိတ်ဆွေသစ်များနှင့်ခင်မင်လွယ်ကာ လိုင်းရွေးချယ်မှု များပြား မည်။
စိတ်ထိခိုက်လွယ်သည်။ ကုန်ရောင်း၊ ကုန်ဝယ် လုပ်ကိုင်တတ်ခြင်း၊ ဈေးကစားတတ်ခြင်းတို့ ရှိမည်။ အလုပ်တစ်ချို့ကို တစ်ပိုင်းတစ်စနှင့် ပစ်ထားတတ်သော အကျင့်ရှိတတ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ မရေမရာ၊ မသေချာပဲ နေရာတကာ ဝင်ပါကာ အချိန်ကို အလဟဿ ဖြုန်းတီးတတ်ပါသည်။ စိတ်ထားနှစ်မျိုး ရှိတတ်၍ အချို့ကိစ္စများတွင် ရဲရင့်လွန်းနေတတ်ပြီး အချို့တွင်မူ ကြောက်ရွံ့လွန်းနေတတ်ပြန်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ရက်ရောသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် နှမြောတွန့်တိုတတ်ပြန်ပါသည်။ သနားတတ်သော စိတ်ရှိသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ရက်စက်တတ် ပြန်ပါသည်။ တည်ငြိမ် စွဲမြဲမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
၆ – ဂဏန်း
၆ – ဂဏန်းရသော အမည်သည် သောကြာဂြိုဟ်၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ အပေါင်းအသင်း၊ မိတ်သင်္ဂဟ ပေါများခြင်း၊ လူချစ်၊ လူခင်များခြင်း၊ ပရိသတ် ချစ်ခင်ကြည်ညိုမှုများ ရရှိခြင်းတို့ကို ပြဆိုပါသည်။
အနုပညာကို လိုက်စား ဝါသနာထုံတတ်သည်။ အလှအပကို မက်မောတတ်သည်။ လှပအောင် ပြုပြင်ပြင်ဆင်တတ်ကာ အနုအရွ များကို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်တတ်သည်။
အနုပညာစိတ်ရှိကာ စိတ်နှလုံး နူးညံ့သိမ်မွေ့တတ်သော်လည်း အယူအဆနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် လွန်စွာခေါင်းမာ၍ မာန်မာန ရှိတတ်သည်။ အလုပ်ကိုတိကျသေချာ၍ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် လုပ်ဆောင်တတ်သည့် သဘောရှိသည်။
စိတ်ဆန္ဒက ပြဌာန်းထားသည့် ကိစ္စများကို အရိုးကြေကြေ၊ အရေခန်းခန်း ရရှိသည်အထိ စွမ်းဆောင်တတ်ကြသည်။ စိတ်တန်ခိုးအင်အား ထက်မြက်မှုကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင်တတ်ကြပါသည်။
ချစ်ခင်မိသူများကို အစစအရာရာသည်းခံကာ အလိုလိုက်တတ်ကြသော်လည်း ခေါင်းမာမိပါက မည်သူ့ကိုမှ အလျှော့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
တောက်ပကြည်လင်သော အရောင်အဆင်းနှင့် အလှအပကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်ကာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင် ဆင်ယင်တတ်သော ပန်းချီမျက်စိ အခြေခံရှိပါသည်။
အပေါင်းအသင်းများကို ချစ်ခင်အောင် ဧည့်ခံစည်းရုံးနိုင်စွမ်းရှိပြီး အချင်းချင်း မနာလို ကွဲပြားခြင်းကို လက်မခံကြချေ။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာစိတ်သည် တစ်ခါတစ်ရံ အစွန်းရောက်၍ သွားတတ်ပါသည်။ သူတစ်ပါးကို ဆွဲဆောင်အား ရှိမည်။
၇ – ဂဏန်း
၇ – ဂဏန်းရှိသော အမည်သည် နက်ပ်ကျွန်းဂြိုဟ်ကို ကိုယ်စားပြုသော အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ စိတ်ကူး၊ စိတ်သန်းကောင်းသော အကြံဉာဏ်ကောင်းများ ရှိကာ တွေးတော ကြံဆနိုင်စွမ်းရှိသော သဘောကို ပြဆိုသည်။
လျှို့ဝှက်နက်နဲသော သဘော၊ အဘိဓမ္မာဆန်သော သဘောတရားများလည်း ရှိမည်။ ထူးခြားသော စိတ်တန်ခိုး များကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိမည်။ အဘိဓမ္မာဉာဏ်နှင့် စိတ်ပညာရပ်များ၊ ဒဿန အတွေးအခေါ်ဆန်းများ၊ ဂမ္ဘီရပညာ၊ ဂန္ဓာရီပညာရပ်များလည်း စူးစမ်းလေ့လာမှုများ ရှိမည်။
စာပေဂီတ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ပညာရပ်များနှင့် ဆက်နွယ် တတ်မြောက်နိုင်ပါသည်။ လေးနက်သော အကြောင်းအရာများ၊ ဆန်းကြယ်သော အကြောင်းအရာများကို ထူးထူးခြားခြား ရေးဖွဲနိင်စွမ်း ရှိတတ်ကြပါသည်။
ခိုင်မာသော အောင်မြင်မှုများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ လွတ်လပ်သော စိတ်ထားကို သဘောကျတတ်မည်။ စိတ်ပူပင်တတ်သည်။ အနာဂတ် နောင်ရေးကို တွေးတော ပူပင် ကြောင့်ကြမှုများ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သီးခြားအတွေးအခေါ်များလည်း ရှိနေမည်။ ငွေကြေးမမြဲသော သဘောရှိ၏။ ကြိုတင်အလိုအလျောက် သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိကာ တစ်ပါးသူကို ပြုပြင် ဆွဲဆောင်နိုင်မည်။
ဝိဉာဉ် သင်္ချာ(၇)မှာ ရေကို ပိုင်စိုးသော ဓါတ်ဖြစ်သဖြင့် ပင်လယ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပညာရပ်များ၊ နိုင်ငံရပ်ခြား၊ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတများ အလွန်ပင် ဝါသနာထုံတတ်ပါသည်။
ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် ခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို နှစ်ခြိုက်သဖြင့် ထိုကိစ္စများတွင် တတ်ကျွမ်းအောင်မြင်မှုများရှိမည်။
၈ – ဂဏန်း
၈ – ဂဏန်း ရသောအမည်သည် စနေဂြိုဟ်၏ အမှတ်အသား သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။ အထီးကျန်၊ အဖေါ်မဲ့မှုကို ဖေါ်ညွှန်းသည်။ (၈)ဂဏန်းအမည် သင်္ချာ ရရှိသူသည် စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်ကာ လေးနက်မှုရှိသည်။ အလယ်အလက်တွင် မနေတတ်ပါ။
အောက်ဆုံးနှင့် အထက်ဆုံး တစ်ခုခုတွင်သာ ရပ်တည်တတ်ကြပါသည်။ အနိမ့်အမြင့်၊ အတတ်အကျ များပြား မြန်ဆန်စွာ ပြောင်းလဲတတ်သည့် သဘောရှိပါသည်။
ဇွဲအလွန်ကောင်း၍ ထူးထူးချွန်ချွန် ကြိုးစားမှု များကြောင့် အဆင့်မြင့်သော ရာထူး၊ ဌာနန္တရ ကြီးများတွင် ရရှိအောင်မြင်တတ်ကြသော်လည်း ကျဆင်း၊ ပျက်စီး၊ နိမ့်ပါးရသည့် သဘောများ ရှိတတ်ကြပြန်ပါသည်။
မနာလိုသူများ၊ မယုံကြည်သူများ၊ အထင်အမြင်လွဲမှား ခံရမှုများ ကြောင့် အခက်အခဲများစွာကို တွေ့ကြုံရတတ်ပါသည်။ တစိုက်မက်မက် မရှိခြင်း၊ အစွမ်းကုန် အားမထုတ်ခြင်း များကြောင့် ဆုံးရှုံးကျဆင်းရခြင်းများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။
အထင်အမြင်လွဲမှားမှု အမျိုးမျိုး ခံရကာ ဖြေရှင်းနိုင် စွမ်းအားလည်း မရှိပဲ ဖြစ်နေတတ်ပြန်ပါသည်။ ပြင်းထန်သော အယူအဆများလည်း ရှိနေတတ်ကြပြီး ရန်သူလည်း များပြားနေရတတ်သည်။
ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သူများအပေါ် ကြင်နာသနားစိတ်ကြီးသည်။ မိမိ၏ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကာ ဆောင်ရွက်ကူညီတတ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို မည်သူ့ကိုမှ ဂရုစိုက်မနေတတ်ပဲ မိမိထင်သလို စိတ်ကြိုက် ပြုမူနေထိုင်တတ်ကြပါသည်။
မေတ္တာတရားနှင့် သမာဓိအားတည်ဆောက်ကာ ဆင်ခြင်တုံတရား လက်ကိုင်ထားမှသာ ကံကြမ္မာဆိုးများကို ဖယ်ရှားအနိုင်ယူနိုင်ပေလိမ့်မည်။
၉ – ဂဏန်း
၉ – ဂဏန်း နာမည်သင်္ချာသည် အင်္ဂါဂြိုဟ် ဂုဏ်သတ္တိများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ သဘော သဘာဝကြောင့် အတိုက်အခိုက်တွင် တော်တတ်ကြပါသည်။ သူရဲကောင်းစိတ်မျိုးရှိကာ သူရဲကောင်းဆန်ဆန်လည်း ပြုမူတတ်ကြသည်။
ရုတ်ခြည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ စစ်မျက်နှာအများအပြားဖွင့်၍ ရန်သူကို ရင်ဆိုင်ခြင်းအမှု ပြုလိုတတ်ကြသည်။ မအောင်မြင်သော တိုက်ပွဲများကိုလည်း ခေါင်းမာမာနှင့် ဆင်နွှဲတတ်ပြန်ပါသည်။
ငယ်ရွယ်စဉ်တွင် ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီး ကြီးပြင်းလာသောအခါမှ အောင်မြင်မှုများ ရရှိတတ် ပါသည်။ စိတ်မြန်၊ စိတ်ကြီးကာ လွတ်လပ်မှုကို ခုံမင်၍ သူတစ်ပါး လက်အောက်တွင် မနေလိုကြချေ။
အတိုက်အခံ များစွာရှိပြီး မိမိကလည်း အတိုက်အခံ လုပ်လိုသည်။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားမှု လွန်ကဲတတ်ကြပါသည်။
အချစ်ကြီးလွန်းတတ်ပြီး အချစ်အတွက်ကြောင့် ဘာမဆိုလုပ်ပေးတတ်သည့် သဘောရှိကာ အချစ်ရူးပမာ အရူးအမူး ဖြစ်တတ်သည်။ သတ္တိစွမ်းရည်ကြောင့် တုပြိုင်သူများနေသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်ရတတ်ပါသည်။
ဘဝစစ်သည်တော်များ ဖြစ်ကြသည်။ မီးဒဏ်၊ ဗုံးသေနတ်၊ ယမ်းပေါက်ကွဲမှုဒဏ် များကြောင့် ထိခိုက်အနာတရ ဖြစ်တတ်ကြပါသည်။
အိမ်သူ၊ အိမ်သား အတူနေသူများနှင့် မသင့်တင့်ပဲ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားကာ ရွံ့ကြောက်အဖြစ် အထင်အမြင်လည်း ခံရတတ်ပါသည်။ အများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်မှ အောင်မြင် တတ်ပါမည်။
Categories ဗေဒင် Tags ဂဏနျးအဟော Post navigation
အဆိပျအတောကျကငျးတဲ့ သဘာဝ ဆေးရှကျကွီး ပိုးသတျဆေးရညျ ပွုလုပျနညျး